Gị Agency arahụ | Martech Zone
Brandemonium | Ọktoba 6-7, 2021 | Ọgbakọ mebere
Gị Agency ara
Thursday, July 28, 2011 Thursday, July 28, 2011 Douglas Karr
Nyaahụ, ekwuru m okwu na Detroit n'isi ụlọ ọrụ nke otu ụlọ ọrụ mba ụwa nwere ọtụtụ ndị enyemaka. Ihe ngosi m dị otu elekere ma lekwasị anya n'otú m ga-esi lee anya nchịkọta dị iche iche… na-achọ ozi na ha amaghịdị adị ma ọ bụ otu o si emetụta azụmahịa ha n'ịntanetị. Ihe ngosi a nwere ụfọdụ nlele dị mma na awa abụọ mgbe nke ahụ gasịrị, m ahapụbeghị Detroit. M na-anọdụ ma na-akparịta ụka na ndị isi ahịa si ọtụtụ ụlọ ọrụ.
Ihe jikọrọ mkparịta ụka a bụ na ha amaghị na ngwaọrụ dị. Ihe ọzọ jikọrọ ya bụ na ụlọ ọrụ ndị ahụ niile nwere nnukwu njikọ na ụlọ ọrụ mba na mba. Obi adịghị ha ụtọ nke ukwuu.
Ọrụ: Ikike nke ime ihe ma ọ bụ igosipụta ike; ọnọdụ nke ịnọ n'ọrụ; ihe omume; akụrụngwa.
Ajụrụ m ụdị nduzi ụlọ ọrụ ha nyere ha. Ọ dịghị onye. Ajụrụ m ma ndị ụlọ ọrụ ahụ nọ na mmemme ahụ. Nope. Ajụrụ m usoro nke ha si banye na ụlọ ọrụ azụmaahịa ha na ụlọ ọrụ ha. Ha kwesiri ịrịọ maka ọnụego. (Nwere ike iche n'echiche inwe nzukọ ahịa na ụlọ ọrụ gị adịghị?)
Nke a abụghị akụkọ otu. N'ezie, anyị na ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ahịa anyị na-arụ ọrụ ugbu a na ọ bụ otu ihe. Anyị na-eche na ịbụ onye ndụmọdụ ụlọ ọrụ tụkwasịrị obi, ụlọ ọrụ ahụ kwuru na ha ga-etinye ọnụ. Ha na-ewu saịtị ahụ, anyị na-edozi saịtị ahụ. Ha na-ere ha na azịza, anyị na-emejuputa ya n'ụzọ ziri ezi. Ha na-akwụ ụgwọ dị ukwuu, anyị na-akwụ ụgwọ ihe uru njikọ ahụ bara na ụlọ ọrụ.
Enwere nnukwu ọdịiche dị n’etiti ụlọ ọrụ na onye na - enyere gị aka. Ọ bụrụ na ị na-na-gị ika mepụtara na ọ bụ a oge-enwe mmetụta ọsọ ọsọ oru ebe ụlọ ọrụ na-achụpụ a mbọn ndu gị n'aka… na ị bụghị gị n'ụlọnga, na ị na a subcontractor. Ọ bụrụ n ’ịgaghị agwa ndị ahịa gị okwu na ohere… ị bụghị ụlọ ọrụ, ị bụ onye ọrụ ngo. Ọ bụrụ na onye ahịa gị na-akpọ gị na-ajụ maka ngwaọrụ ma ọ bụ teknụzụ kachasị ọhụrụ… ị bụghị ụlọ ọrụ, ị bụ onye ọrụ ngo.
Okwu nnọchite anya sitere na okwu agentia, nke sitere na agens. Nke a pụtara “Ime” or “Ime” or “Ime ihe”. Mgbe ị chere echiche banyere okwu a, ọ na - enye gị ikike ịnakọta ndị nwere ikike ị nyefere ọrụ na nke chọrọ nka ha… ha bụ ogwe aka ma ọ bụ mgbatị azụmaahịa gị.
Ndị na-eme nkwekọrịta na-enye onyinye. Ndị na-edo onwe ha n'okpuru ọrụ na-enye usoro iheomume. A na-akwụ ndị na-akwụ ụgwọ ụgwọ ụgwọ n'agbanyeghị ihe egwu. Genlọ ọrụ na-enye ntụzịaka, nye atụmatụ, nye mgbado anya, nye azịza… ma nwekwaa ihe egwu.
Anyị ụlọ ọrụ na-enye ha abụọ. Anyị na-eme nkwekọrịta anyị na arụ ma na-arụ ọrụ dịka ụlọ ọrụ nye ndị ọzọ. Enwere m olile anya iwepu ọrụ niile m ga - emecha, mana ọrụ na - eme ka ọkụ ghara ịnwu. Anyị anaghị atọ ha ụtọ. Mgbe a na-enyefe anyị ọrụ, ndị ahịa na-ekwupụtakarị ihe ndị achọrọ ma anyị enweghị ọnụ ụlọ ahụ itinye aka gafere ma ọ bụ gbanwee atụmanya maka abamuru nke onye ahịa ahụ.
Dị ka ụlọ ọrụ, mgbe ụfọdụ anyị na onye ahịa anyị na-arụ ụka. Ọbụna mgbe ụfọdụ anyị na-achụ ha n'ọrụ. A na-ejikarị ọtụtụ ụlọ ọrụ were ndị ọrụ ngo ụgwọ na ha chefuru ihe ọ dị ka ịnwe onye nchịkwa, onye ndu na onye ọlụlụ na-agwa gị ihe ị bụ mkpa ime. Ọ bụrụ na ịchọrọ imeri, ị ga-enweta onye nchịkwa. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka onye ọzọ gbaa ọsọ ahụ you atụla anya na ị ga-emeri. Lọ ọrụ na-ewepụta ndị mmeri.
Ekwere m okwu a gị n'ụlọnga bụ otu n'ime okwu kachasị emetụta na ụlọ ọrụ ịzụ ahịa. Achọrọ m ka ụlọ ọrụ ndị ọzọ kpọrọ onwe ha ụlọ ahịa. Logo ụlọ ahịa, ụlọ ahịa weebụ, ụlọ ahịa mgbasa ozi, ụlọ ahịa vidiyo. Na ụlọ ahịa, ị na-abanye, na-akwụ ụgwọ ma na-apụ. N'ezie, ụlọ ahịa agaghị enwe ike ịnye ụgwọ otu ego ndị ọrụ na-akwụ… ikekwe nke ahụ bụ nsogbu!
Douglas Karr Thursday, July 28, 2011 Thursday, July 28, 2011
Webtrends égwu Ọganihu n'ime Webtrends Social
Social Media na gị Business Communication Strategy